कुनै पर्यटन छैन, कोभिड छैन, तर अन्तिममा नि: शुल्क: नाउरू गणतन्त्र
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » नाउरु ब्रेकि News न्युज » कुनै पर्यटन छैन, कोभिड छैन, तर अन्तिममा नि: शुल्क: नाउरू गणतन्त्र
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • संस्कृति • सरकारी समाचार • स्वास्थ्य समाचार • नाउरु ब्रेकि News न्युज • समाचार • मान्छे • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
यस संसारमा धेरै ठाउँहरु बाँकी छैनन्, जहाँ कोभिड अझै एक मुद्दा बनेको छैन, र कोभिड मुक्त छ। एक नाउरू को द्वीप गणतन्त्र हो।
नाउरु अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन को लागी नगण्य छ।
नाउरू एक सानो टापु र अष्ट्रेलिया को उत्तर पूर्व एक स्वतन्त्र देश हो। यो भूमध्य रेखा को ४२ किलोमिटर दक्षिण मा स्थित छ। एक कोरल रीफ सम्पूर्ण टापु जो pinnacles संग बिन्दु छ घेरिएको छ।
जनसंख्या-लगभग १०,००० गैर-नौरुआन जनसंख्या सहित। १०००
देश मा कुनै कोरोनाभाइरस केसहरु छैनन्, तर अमेरिकी सरकार नाउरु को यात्रा गर्दा खोप लगाउन को लागी सिफारिश गरीरहेको छ
जब कोरोनाभाइरस मा विश्व तथ्या्क हेर्दै, एक स्वतन्त्र देश सधैं हराइरहेको छ। यो देश नाउरु गणतन्त्र हो। नाउरु दक्षिण प्रशान्त महासागर मा एक टापु गणतन्त्र हो
नाउरूका मानिसहरु १२ जनजातिहरु मिलेर बनेका छन्, जसको प्रतीक नाउरु झण्डामा १२-पोइन्ट तारा द्वारा छ, र माइक्रोनेशियन, पोलिनेशियन, र मेलानेशियन वंश को मिश्रण मानिन्छ। तिनीहरूको मातृभाषा नाउरुआन हो तर अंग्रेजी व्यापक रूपमा बोलीन्छ किनकि यो सरकारी र व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरीन्छ। प्रत्येक जनजातिको आफ्नै प्रमुख हुन्छ।
नाउरु झण्डा धेरै सरल र सादा छ, रंगहरु नेवी ब्लू, पहेंलो, र सेतो संग। प्रत्येक रंग को महत्व छ। नौसेना नीलो नाउरू वरपर सागर को प्रतिनिधित्व गर्दछ। पहेँलो रेखा भूमध्य रेखा को बीचमा छ किनभने नाउरू सही भूमध्य रेखा को छेउमा छ र यही कारण छ कि नाउरू धेरै तातो छ। सेतो १२ नुकीला तारा नाउरू को जनता को १२ जनजाति को लागी खडा छ।
यसैले नौरुआन झण्डा यस प्रकार रंगीन छ।
२००५ मा फास्फेट खानी र निर्यात को पुनः सुरु नौरु को अर्थव्यवस्था एक धेरै आवश्यक बढावा दियो। फास्फेट को माध्यमिक निक्षेप को बारे मा 2005 बर्ष को एक अनुमानित शेष जीवन छ।
१ 1900 ०० मा फास्फेट को एक धनी निक्षेप पत्ता लगाइएको थियो र १ 1907 ०XNUMX मा प्रशान्त फास्फेट कम्पनी अष्ट्रेलिया को लागी फास्फेट को पहिलो ढुवानी पठाइयो। आज सम्म फास्फेट खनन नाउरु को आर्थिक राजस्व को मुख्य स्रोत बनेको छ।
31 जनवरी स्वतन्त्रता दिवस हो (ट्रक सालगिरह बाट फिर्ता)
यो राष्ट्रिय दिवस सरकार द्वारा मनाईन्छ, विभिन्न सरकारी विभागहरु र साधनहरु को लागी खेल र कोरल प्रतियोगिताहरु को आयोजन। साथै, हृदय मा युवाहरु को लागी एक भोज आयोजित छ। (ज्यादातर ट्रक का बचेका)
यो दिन पूरै टापु द्वारा5निर्वाचन क्षेत्रहरु को बीच एक ट्रैक र क्षेत्र प्रतियोगिता भएको मनाईन्छ।
१ जुलाई NPC/RONPhos हस्तान्तरण छ
नाउरू फास्फेट कर्पोरेशनले ब्रिटिश फास्फेट आयोगबाट किनेपछि नाउरुमा फास्फेट खनन र ढुवानीको जिम्मा लिएको थियो। त्यसपछि RONPhos NPC बाट 2008 मा लिईयो।
26 अक्टोबर ANGAM दिवस हो
अंगम भनेको घर आउनु हो। यो राष्ट्रिय दिवस विलुप्तताको कगारबाट नाउरु जनताको फिर्ताको सम्झना गर्दछ। प्रत्येक समुदाय सामान्यतया आफ्नो उत्सवहरु को आयोजन गर्दछ किनकि यो दिन सामान्यतया परिवार र प्रियजनहरु संग मनाईन्छ।
जब एक बच्चा जन्मिन्छ ऊ/उनी आफ्नो जनजाति को आमा को पक्ष बाट उत्तराधिकार पाउनेछन्। प्रत्येक जनजाति को लागी कपडा सबै फरक छ जो प्रत्येक व्यक्ति को पहिचान गर्न मा मद्दत गर्दछ।
१२ नाउरु जनजातिहरुको सूची:
Eamwit - साँप/ईल, धूर्त, फिसलन, झूट बोल्ने र शैली को copier मा राम्रो।
Eamwitmwit - क्रिकेट/कीरा, व्यर्थ सुन्दर, सफाई, एक कर्कश शोर र तरीका संग समान।
Eaoru - विध्वंसक, हानिकारक योजनाहरु, ईर्ष्यालु प्रकार।
Eamwidara - dragonfly।
Iruwa - अपरिचित, विदेशी, अन्य देशहरु बाट एक व्यक्ति, बुद्धिमान, सुन्दर, मर्दाना।
Eano - सीधा, पागल, उत्सुक।
Iwi - जुवा (विलुप्त)।
Irutsi - नरभक्षण (विलुप्त)।
Deiboe - सानो कालो माछा, मूडी, धोखेबाज, व्यवहार कुनै पनि समय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
रानीबोक - वस्तु किनारमा धोईयो।
Emea - रेक, दास, स्वस्थ, सुन्दर कपाल, मित्रता मा धोखा को प्रयोगकर्ता।
Emangum - खेलाडी, अभिनेता
सबै भिसा आवेदनहरु मिडिया कर्मियों को लागी सहित सहित, नाउरू प्रवेश गर्न को लागी एक ईमेल अनुरोध नाउरु आप्रवासन लाई पठाइनु पर्छ।
अस्ट्रेलियन डलर नाउरू मा कानूनी टेन्डर हो। कुनै पनि आउटलेट मा विदेशी मुद्रा मुश्किल हुनेछ। नाउरु मा नगद मात्र भुक्तानी को रूप हो।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड स्वीकार्य छैन।
त्यहाँ दुई होटल, एक सरकारी स्वामित्व र एक परिवार को स्वामित्व वाला होटल हो।
त्यहाँ दुई अन्य आवास विकल्प (एकाइ प्रकार) निजी स्वामित्वमा छन्।
यो सधैं गर्मी छ नाउरू मा, सामान्यतया उच्च 20s को आसपास-मध्य 30s। गर्मी को कपडा सिफारिश गरीन्छ।
ग्रीष्मकालीन लुगा/आकस्मिक लुगा स्वीकार्य छ तर यदि सरकारी अधिकारीहरु संग भेटघाट गर्न वा चर्च सेवाहरु मा भाग लिने, यो उचित पोशाक को लागी सिफारिश गरीन्छ। पौडी खेल्ने नाउरु मा एक आदर्श छैन, पौडी खेल्नेहरु या त उनीहरु मा एक sarong वा शॉर्ट्स लगाउन सक्छन्।
त्यहाँ कुनै सार्वजनिक यातायात छैन। कार भाडामा सिफारिस गरिएको छ।
फलफूलका रूखहरु नरिवल, आम, pawpaw, चूना, breadfruit, खट्टा sop, pandanus हुन्। स्वदेशी कडा काठ tomano रूख हो।
त्यहाँ फूल रूखहरु/बिरुवाहरु को एक किस्म हो तर सबैभन्दा व्यापक रूप बाट प्रयोग/मनपर्ने फ्रान्जीपानी, iud, हिबिस्कस, irimone (चमेली), eaquañeiy (tomano रूख बाट), emet र पहेंलो घण्टीहरु छन्।
Nauruans समुद्री खाना को एक किस्म खान्छन् तर माछा अझै पनी Nauruans को एक मनपर्ने खाना हो - कच्चा, सुकेको, पकाएको।
नाउरूमा कोभिड -१ case को कुनै केस छैन, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई कुनै रिपोर्ट गरिएको थिएन, तर अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई यो अज्ञात स्थिति जोखिमपूर्ण छ, पूर्णरुपमा खोप लगाएका यात्रुहरु लाई सिफारिश गर्दछ।
त्यहाँ पीसीआर र/वा प्रतिजन नाउरु मा उपलब्ध परीक्षण छन्, परिणाम विश्वसनीय छन् र hours२ घण्टा भित्र।
अक्सफोर्ड-एस्ट्रा जेनेका खोप देश मा उपलब्ध छ
नाउरु एक राष्ट्रिय कथा छ:
एक पटक एक समय मा, त्यहाँ एक मानिस Denunengawongo भनिन्छ। उनी आफ्नी श्रीमती ईदुवोo्गो संग समुद्र मुनि बस्न थाले। उनीहरुको एउटा छोरा थियो जसको नाम मददार थियो। एक दिन, उसको बुबाले उसलाई पानीको सतहमा लगे। त्यहाँ उनी एक टापुको किनारमा नपुगुन्जेल सम्म बगिरहे, जहाँ उनी एक सुन्दर केटी Eigeruguba द्वारा भेटिए।
Eigeruguba उसलाई घर लगे, र पछि दुई विवाहित थिए। उनीहरुका चार छोराहरु थिए। जेठोलाई एडुगुगिना, दोस्रो डुवारियो, तेस्रो एडुवरेज र कान्छोलाई एडुवोगोनोगन भनिन्थ्यो। जब यी केटाहरु ठुला ठुला मानिसहरु बन्न पुगे, उनीहरु महान मछुआरे बने। जब उनीहरु पुरुष बनिसकेका थिए, उनीहरु आफ्ना आमा बुबा बाट टाढा रहन्थे। धेरै बर्ष पछि, जब उनीहरुका आमा बुबा बुढो भैसकेका थिए, उनकी आमाको अर्को बच्चा थियो। उनलाई डेटोरा भनिन्थ्यो। जब उनी हुर्कंदै थिए, उनी आफ्ना आमा बुबा संग बस्न र उनीहरुले बताएको कथा सुन्न मन पराउँथे। एक दिन, जब उनी लगभग मर्दानगतिमा बृद्धि भैसकेका थिए, उनी बाहिर हिँडेका थिए जब उनले एउटा क्यानो देखे। उहाँ उनीहरुकहाँ जानुभयो, र उनीहरुले उनलाई उनीहरुको सबैभन्दा सानो माछा दिए। उहाँले माछा घरमा ल्याउनुभयो र तिनीहरूलाई दिनुभयो। भोलिपल्ट उसले त्यही काम गर्यो तर तेस्रो दिन उसका आमा बुबाले उसलाई आफ्ना भाइहरु संग माछा मार्न बाहिर जान भने। तेसैले उनीहरु उनीहरुको डु can्गामा गए। जब उनीहरु त्यो साँझ फर्के, भाइहरु Detora मात्र सबैभन्दा सानो माछा दिए। त्यसैले Detora घर गए र यसको बारेमा आफ्नो बुबालाई बताइयो। तब उसको बुबाले उसलाई माछा मार्न सिकाउनुभयो, र उसलाई उसको हजुरबा हजुरआमाको बारेमा बताउनुभयो, जो समुद्र मुनि बस्नुहुन्थ्यो। उसले उसलाई भन्यो कि, जब उसको लाइन अड्कियो, ऊ यसको लागी तल डुब्नै पर्छ। र जब उनी आफ्ना हजुरबुबा हजुरआमाको घरमा आए, उनी भित्र पस्नु पर्छ र आफ्नो हजुरबुबालाई उसको मुखमा रहेको हुकहरु दिनको लागी सोध्नु पर्छ; र उसले उसलाई प्रस्ताव गरिएको कुनै अन्य हुक अस्वीकार गर्नुपर्छ।
अर्को दिन, डेटोरा धेरै चाँडै उठे र आफ्ना भाइहरु लाई गए। तिनीहरूले उसलाई धेरै गाँठो संग एक माछा मार्ने लाइन दिए, र एक हुक को लागी सीधा स्टिक को एक टुक्रा। समुद्रमा बाहिर, उनीहरु सबैले आफ्नो लाइनहरु फ्याँकिदिए, र, अब र पछि, भाइहरु एक माछा समात्छन्; तर डेटोराले केहि पक्रिन। अन्तमा, उहाँ थकित हुनुभयो र उसको लाइन चट्टानमा पकडियो। उनले आफ्ना भाइहरुलाई यसको बारेमा भने, तर उनीहरु मात्र उसलाई ठट्टा गरे। अन्तमा, उनी डुब्यो। उनले त्यसो गर्दा उनीहरु आफैंले भने, 'ऊ कस्तो मूर्ख साथी हो, हाम्रा भाइ!' गोताखोरी पछि, Detora आफ्नो हजुरबा हजुरआमा को घर पुग्यो। उनीहरु त्यस्तो केटालाई आफ्नो घरमा आएको देखेर धेरै छक्क परे।
'तिमी को हौ?' उनीहरुले सोधे। 'म डेटोरा, मदरदार र ईगरगुबाको छोरा हुँ' उनले भने। जब उनीहरु उनको आमा बुबा को नाम सुने, तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। तिनीहरूले उहाँलाई धेरै प्रश्न राखे, र उहाँलाई ठूलो दया देखाए। अन्तमा, जब उनी बिदा हुन लागेका थिए, उनको बुबाले उनलाई भनेको कुरा याद गरेर, उनी आफ्नो हजुरबुबालाई उसलाई एक हुक दिन आग्रह गर्छन्। उसको हजुरबुबाले उसलाई घरको छतबाट मनपर्ने कुनै पनि हुक लिन भन्नुभयो।
नाउरू कोभिड-मुक्त छ। नाउरू र ब्रिस्बेन, अष्ट्रेलिया को बीच एक साप्ताहिक उडान सञ्चालन गर्न जारी छ। सबै यात्रुहरु नाउरू को लागी सरकार को पूर्व अनुमोदन आवश्यक छ।
Damo पुरुषहरु लाई फेरि आफ्नो लाइन मा फेंकियो, र यस पटक उनीहरु माछा को एक फरक प्रकार को पकड। 'यो एक को नाम के हो?' उनीहरुले सोधे। र Detora जवाफ दिए, 'Eapae!' फेरि नाम सही थियो। यसले दामो मछुवाहरुलाई रिस उठायो। डेटोराको ब्रुथ्स उनको चतुराईमा धेरै आश्चर्यचकित थिए। डेटोरा अब आफ्नो लाइन बाहिर फ्याँक्नुभयो र एक माछा तान्नुभयो। उनले दामो पुरुषहरुलाई यसको नाम सोधे। उनीहरुले 'इरम' जवाफ दिए तर जब उनीहरुले फेरी हेरे, उनीहरु लाई थाहा भयो कि उनीहरु गलत थिए, किनकि लाइनको अन्त्यमा कालो अनुहार थियो। फेरी डेटोरा आफ्नो लाइन मा फ्याँक्नुभयो र फेरी उनले उनीहरुलाई माछाको नाम दिन आग्रह गरे। 'Eapae,' तिनीहरूले भने। तर जब उनीहरुले हेरे उनीहरु डेटोरा लाइन को अन्त्य मा पोर्क को एक टोकरी भेटियो।
अब सम्म दामो पुरुषहरु धेरै डराएका थिए, किनकि उनीहरुलाई थाहा भयो कि डेटोरा जादू को उपयोग गरीरहेको थियो।
डेटोराको क्यानो अर्कोको छेउमा नजिकै तानिएको थियो, र उसले र उसका भाइहरूले दामो पुरुषहरुलाई मारे र उनीहरुका सबै माछा मार्ने गियर लिए। जब मानिसहरु किनारा मा यी सब देखे, उनीहरु जान्दथे कि उनीहरुका मानिसहरु माछा मार्ने प्रतियोगिता मा पराजित भएको थियो, किनकि यो त्यस्तो माछा मार्ने प्रतियोगिता को विजेताहरु को लागी उनीहरुका विरोधीहरुलाई मार्न र माछा मार्ने गियर लिने चलन थियो। तेसैले उनीहरुले अर्को डुoe्गा पठाए। उस्तै कुरा पहिले जस्तै भयो, र दामो को मानिसहरु धेरै डराए र समुद्र तट बाट भागे। तब डेटोरा र उसका भाइहरूले आफ्नो डु can्गा किनार तर्फ ताने। जब उनीहरु चट्टानमा पुग्यो, डेटोराले तल उसका चार भाइहरु संग क्यानो टिप दिए; क्यानो एउटा चट्टानमा परिणत भयो। डेटोरा द्वीपमा एक्लै उत्रियो। चाँडै, उहाँ एक मानिस जो उसलाई चट्टान मा आरामी र माछा पकडने को लागी एक प्रतियोगिता को लागी चुनौती दिनुभयो। उनीहरुले एउटा देखे र दुबै जना यसको पछि लाग्न थाले। डेटोरा यसलाई समात्न सफल भयो, त्यसपछि उसले अर्को मानिसलाई मार्यो र भाग्यो। समुद्र तट संग टाढा, Detora प्रतियोगिता पनि जित्यो, र आफ्नो चुनौती लाई मार्यो।
Detora अब टापु को अन्वेषण गर्न को लागी बाहिर सेट। भोक लाग्दा उनी नारियलको रुखमा चढे र केही पकाएको नट खसे, जसको दूध उनले पिए। नारियल को भुसी संग, उसले तीन आगो बनायो। जब आगो चम्किरहेको थियो, उसले केहि नरिवलको मासु फ्याँक्यो, र यो एक मीठो गन्ध बनायो। त्यसपछि उनी आगो बाट केहि यार्ड टाढा बालुवा मा सुते। उनी लगभग सुतिरहेकी थिइन् जब उनले एक खैरो माउस आगोको नजिक पुगेको देखे। यो पहिलो दुई आगो बाट नारियल खायो र, जसरी यो तेस्रो आगो बाट नरिवल खाने को बारे मा थियो, Detora यो पकड्यो र यसलाई मार्न जाँदै थियो। तर सानो माउसले डेटोरालाई मार्न नदिन आग्रह गरे। 'मलाई जान दिनुहोस्, कृपया, र म तपाइँलाई केहि बताउँछु' यो भनिएको छ। डेटोराले माउस छोडे, जुन आफ्नो प्रतिज्ञा नराखेर भाग्न थाल्यो। डेटोराले फेरि माउस समात्यो, र एउटा सानो लट्ठी को टुक्रा उठाएर, यो संग माउस को आँखा बाट छेड्ने धम्की। माउस डरायो र भन्यो, 'त्यो सानो ढु that्गा त्यो ठूलो चट्टान को शीर्ष बाट रोल र तपाइँ के पाउनुहुन्छ'। डेटोरा ढु away्गा टाढा लुकाईयो र एक मार्ग भूमिगत अग्रणी भेटियो। प्वालमा पस्दै, उसले एक साँघुरो बाटो संगै आफ्नो बाटो बनायो जब सम्म कि उनीहरु को लागी हिड्ने बाटो को लागी आउछन्।
डेटोरा उनीहरुले बोलेको भाषा बुझ्न सकेनन्। अन्त्यमा उनले आफ्नो भाषा बोल्ने युवकलाई भेटे, र उनलाई डेटोराले आफ्नो कथा सुनाए। जवान मानिसले उसलाई नयाँ भूमि को धेरै खतराहरु को बिरुद्ध चेतावनी दिए, र उसलाई आफ्नो बाटो संग निर्देशित गरे। डेटोरा अन्तमा एक ठाउँमा आउनुभयो जहाँ उसले एक सुन्दर प्लेटफर्म को राम्रो मैट संग एक प्लेटफार्म देखीयो। मञ्चमा एक रानी लाउज बसेकी थिइन्, उनको वरिपरि उनका सेवकहरु संग।
रानीले डेटोरालाई स्वागत गरे, र उनीसँग प्रेममा परे। जब, केहि हप्ता पछि, डेटोरा घर फर्कन चाहन्थे, लाउज-रानीले उनलाई छोड्न अनुमति दिदैनन्। तर, अन्तमा, जब उनले उसलाई पत्थर मुनि आफ्ना चार भाइहरु को बारे मा बताए जो उनको जादू को जादू बाहेक रिहा गर्न सकिदैन, उनले उनलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिए। उनले भेटेका धेरै मानिसहरु अपरिचितलाई हानि गर्न चाहन्थे, तर डेटोराले ती सबैलाई जादुई जादू संग पराजित गरे।
एक अन्तिम उनीहरु चट्टानमा आए जहाँ डेटोराले आफ्ना भाइहरुलाई छोडेका थिए। उनी झुके, एक जादुई जादू दोहोर्यायो, र ठूलो चट्टान उसको चार भाइहरु भएको क्यानोमा बदलियो। सँगै भाइहरु आफ्नै भूमि को लागी जहाज सेट।
समुद्र मा धेरै दिन पछि, उनीहरु टाढा मा घर टापु देखे। जब उनीहरु यसको नजिक आए, डेटोराले भाइहरुलाई भने कि उनी उनीहरुलाई छोडेर समुद्रको फेदमा आफ्ना हजुरबुबा हजुरआमा संग बस्न जाँदैछन्। उनीहरूले उहाँलाई उनीहरुसंगै रहन को लागी कोसिस गर्ने कोशिश गरे, तर उनी क्यानोको छेउमा उफ्रिए, र उनी तल गए। भाइहरु आफ्नो आमा बुबा को लागी आफ्नो बाटो बनायो र आफ्नो रोमांच को सुनाए।
जब डेटोरा आफ्ना हजुरबुबा हजुरआमाको घरमा पुग्यो, उनीहरुले उनलाई राम्रो स्वागत गरे। हजुरबुबा हजुरआमाको मृत्यु पछि, Detora समुद्र को राजा र माछा मार्ने र मछुवाहरु को महान आत्मा बने। र आजकल, जब पनी माछा मार्ने लाइन वा हुक एक क्यानो बाट हराए, यो ज्ञात छ कि उनीहरु डेटोराको घरको छतमा पल्टिरहेका छन्।